Kuo: taxanaha 5aad ee Apple Watch oo lagu soo bandhigayo shaashadaha muuqaalka Japan | Wararka IPhone
Kuo: Apple Watch taxanaha 5 si loo bilaabo dayrta oo leh shaashado OLED oo laga keenay Japan Display
Sida uu sheegayo falanqeeyaha caanka ah Ming-Chi Kuo, Japan Display si ay u siiso bandhigyada OLED ee taxanaha cusub ee 5 Apple Watch ayaa la sii deyn doonaa qeybta labaad ee 2019.
Waxay u badan tahay in lagu soo bandhigi doono Apple Keynote soo socda ee la filayo bisha Sebtembar, oo ay weheliso iPhone 11 cusub.
In a War-saxaafadeed ee Tilmaamaha Caalamiga ah ee 'TF International' ee maanta lala wadaago warbaahinta Shiinaha, Kuo Saadaalinta Japan Muujinta si tartiib tartiib ah loogu kordhiyo saamiga dalabkeeda ee OLED Bandhigga loogu talagalay Apple Watch, oo ka bilaabmaya boqolkiiba 15-20 amarrada sannadka 2019 oo gaaraya 70-80 boqolkiiba sannadka 2021.
Kuo wuxuu rumeysan yahay inuu si tartiib tartiib ah u kordhin doono saamiga LG ee soo bandhigida OLED ee iphone, wuxuuna u adeegsan doonaa soosaaraha Shiinaha ee BOE inuu yahay alaab-qeybiye dheeri ah, isagoo isku dayaya inuu kala duwo silsiladda wax soo saarka, oo ah wax aad ugu badan shirkadda Apple.
Noocyada taxanaha cusub ee Apple Watch 5 ayaa loo badinayaa in la soo bandhigi doono bisha soo socota, iyada oo ay weheliyaan saddexda iphone cusub. Tani maahan wax cusub, maadaama taxaneyaashii hore ee Apple Watch la sii daayay bishii Sebtember.
Waa jirtay wax aad u yar oo daadis ah oo ku saabsan taxanaha cusub. Kaliya waxa uu saadaaliyay ayaa la ogyahay Kuo maalmo kahor, naqshad cusub oo guryaha dhoobada ah, iyo fidinta liiska wadamada aqbalaya adeegsiga ECG-da cusub ee lagu hirgaliyay taxanaha 4 ee hada jira, laakiin iyada oo aan la cayimin in ay ahayd taxane cusub. Reuters waxay sidoo kale soo warisay in Bandhigga Japan uu bilaabi doono soo bandhigidda bandhigyo saacadda ah, laakiin ma uusan cayimin inay noqon doonto taxane cusub sidoo kale.
Xanta kale waxay soo jeedinayaan taas taxanaha cusubi wuxuu qaadan doonaa badhanno adag, oo aan muuqaal ahaan gujin, laakiin taa bedelkeeda siisa jawaab celin haptic ah isticmaalaha markii badhanka la taabto. Apple horeyba waxay u soo saartay nidaamkan taajkii dhijitaalka ahaa ee taxanaha 4, oo hadda jawaab celinta haptic-ga ah waxaa lagu kordhin karaa badhanka dhinaca.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Alaabada Apple » Apple Watch » Kuo: Apple Watch taxanaha 5 si loo bilaabo dayrta oo leh shaashado OLED oo laga keenay Japan Display
IPhone 11 wuxuu isticmaali doonaa isla qalabka dhismaha iyo shaashadda sida Galaxy Note 10
Apple waxay qaaddaa talaabooyin adag si looga hortago raadinta internetka